Mootummaan dhimma WBO hordofaa jira- obbo Admaasuu – Fana Broadcasting Corporate
Mootummaan dhimma WBO hordofaa jira- obbo Admaasuu
Finfinnee, Eebila 7, 2011(FBC)- Waraana Bilisummaa Oromoo(WBO) Xoollaayitti leenjirra jiran keessaa fayyaa waliin walqabatee hoospitaala kan galan haala gaarirra jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise.
Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatin ibsa baasen mootummaan dhimmichaaf xiyyeeffannaa laatee, qorachuudhan deebii akka laatu gaafateera.
Hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoon Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma leenjitoota kanaa waliin walqabatee haala deemaa jiru abbummaan xiyyeeffannaa itti laatee hordofaa jira.
Miseensonni WBO kuma 1 ol ta’an karaa nagayaatin qabsaa’uuf meeshaa waraanaa isaanii koree teeknikaa araara mootummaa fi ABO, abbootii Gadaa fi Haadha Siinqeef laatan, baatiiwwaniin dura mooraa leenjii seenun isaanii ni yaadatama.
Yaata’uutii kaleessa leenjitoota Xoollaay jiran keessaa kan rakkoon fayyaa irra ga’e, kiliinika mooraa Xoollaayii fi Hoospitaala Luuqaasitti deeggarsi yaalaa taasifameefira.
Madda rakkinichaa adda baasuuf dhimmichi qoratamaa akka jirus obbo Admaasuun ibsaniiru.
Yaata’uutii odeeffannoon nyaata summaa’e jedhu dogongora akka ta’e eeraniiru.
Rakkinichi kan mudate shayii waliin walqabatee akka ta’e himamus, mootummaan qulqulleessaa jiraachuu hoggantichi ibsaniiru.
Warri deeggarsa yaalaa argatan, haala gaarirra jiraachuu fi miidhaan lubbuun akka hin qaqqabin obbo Admaasuun beeksisaniiru.
Mootummaan akkuma dhimma kana dhaga’een xiyyeeffannaa kennee hordofaa kan jiru yammuu ta’u, odeeffannoon ummata burjaajessu qulqullaa’aa kan deemu ta’uu ibsaniiru.
Rakkinicha sirriitti qulqulleessudhaaf samuudaan qorannoodhaf gara Paastaritti ergameeras jedhaniiru obbo Admaasuun.
Kanaan ala Koomiishiniin Poolisii Oromiyaa fi Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa dhimmicha xiyyeeffannaadhan hordofaa jiraachuu hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoon FBCtti himaniiru.
Mooraa leenjichaatti leenjitoonni argaman karaa tasgabbii qabuun leenjii isaanii itti fufuus obbo Admaasuu Daamxoon ibsaniiru.
Ummanni Oromootis odeeffannoo karaa mootummaatin laatamu hordofuun, dhugaa jiru qulqulleeffachaa burjaajjiif akka hin saaxilamne tasgabbaa’uu akka qabu dhaamaniiru.
Jeequmsa magaalaa Hawaasaa mudate tasgabbeessuf hoojjetamaa jiraachuun ibsame
Waltajjiin marii labsii tajajaila lammummaa gaggeeffamaa jira
Preezdaantiin FDRI Saahilawarq Zawdeen barattoota qaro dhabeeyyii ebbifaman…
MM Dr Abiy Ahimad, preezdaan Isaayyaas Afawarqii waliin mari’atan